Maxamud waxa uu doonayaa in uu wax ka badalo aragtida Soomaalida | Somaliska
Maxamud waxa uu doonayaa in uu wax ka badalo aragtida Soomaalida
Mohamud Salad waa nin dhalinyaro ah oo doonaya in uu wax ka badalo aragtida laga qabo Soomaalida iyo sida Soomaalidu Sweden ku nool ay isku arkaan. Wareysi xiiso leh oo uu siiyay wargeyska Värmlands Folkblad ayuu Maxamud Salaad oo hada ku nool magaalada Göteborg kaga waramay xaaladii uu soo maray markuu yimid Sweden dhamaadkii 80-maadkii iyo Xaalada Soomaalida Sweden.
Maxamud Salaad waxa uu hada qabanqaabiye ka yahay dhowr mashruuc oo kor loogu qaadayo niyada dhalinayada Soomaalida. Buuga uu diyaariyay waxaa la dhahaa Vara Vilja Kunna kaaso soo bandhigaya sheekooyinka dadka Soomaalida ah ee hawsha fiican ka qabta Sweden. Maxamud ayaa sheegay in Soomaalida marka horeba laga aamisanyahay in ay fashil yihiin oo taasi ay saameyn ku yeelato xaaladooda. Waxa uu sheegay markii uu ka guuray magaalada Sunne ee gobolka Värmland una guuray Göteborg in uu dareemay cunsuriyada ka dhanka ah Soomaalida oo loo hayso in ay yihiin kuwo lazy ah, mayal adag, qaadka cuna oo haweenka cadaadiya. Ka dib waxbarashadii ayuu noqday farshaxan yaqaan isagoo ay la daristay in dhowr jeer hadalo cunsuriyad ah loogu yeeray.
Waxa uu sheegay in loogu yeeri jiray in uu ka duwan yahay Soomaalida kale, taasoo uu sheegay in uusan u arag amaan balse u arkay aflagaado ka dhan shacabkiisa. Waxa uu sheegay in Soomaalidu ay noqdeen wado lagu socdo oo xitaa sanadkaan ay dhacday in wariye caan ah oo SVT ka hadla uu hadalo dacaayad ah ka sheegay Soomaalida.
– Qaar badan oo Soomaalida ka mid ah ayaa waxay dareemayaan in loo qoray guul daro. Marka xili kasta lala xiriiriyo shaqo la’aan, gooni istaag iyo waxkasta oo negative ah. Waa fududahay in Soomaalida farta lagu fiiqo maadaama aanan cod ku lahayn warbaahinta – Ayuu yiri Maxamud.
Sababta ku dhalisay in uu buuga qoro ayuu sheegay in ay ahayd in uu dareemay in dhalinyaro badan oo Soomaali ah ay ka xishoonayaan in ay ku faanaan asalkooda. Oo mararka qaar ay sheegtaan in ay ka yimaadeen wadamo kale oo Afrika ah. Buuga ayuu doonayaa in uu ku muujiyo in guul laga gaari karo Sweden oo ay wanaagsantahay in qofku uu labo dhaqan leeyahay. Buuga ayaa ka hadlaya nolosha iyo wadada ay horumarka ku gaareen 20 qof oo ku nool Sweden oo isugu jira qeybaha bulshada.
Maxamud ayaa sidoo kale doonaya in Soomaalidu ay la qabsadaan Sweden, buuga ayaa hada lagu fikirayaa in loo akhriyo dadka cusub ee yimid Sweden iyo swedishka doonaya in ay wax ka fahmaan Soomaalida. Balse waxa uu sheegay in aysan wanaagsaneyn arintu maadaama wadanku arakti xun ka qabo Soomaalida.
– Runtii ma wanaagsana in qof wadanka 20 sano joogay uusan ku hadli karin luuqada. Balse yaa masuuliyada iska leh? Ma qofka ka soo cararay dagaal sogeeye, aan waxbarasho lahayn oo aan cidna garaneyn mise waxaa wanaajin u baahan nidaamka wadanka? Waa in aanan iloobin in Soomaali badan ay yihiin dad karti leh. Waxay soo mareen wado dheer. Ma filayo in qof uga yimid Afrika in uu 3000-4000kr oo cayr ah qaato. Waa in aan la hor istaagin hamiga dadka.
Ciid Wanaagsan. Eid Mubarak
Xagee kala marayaan xisbiyada ku loolamaya doorashada Sweden?
Noorweey: Xisbi dhabar jebiyey soomaalida taageeri jirtay
fikirgeyga Maxamud waxuu ka hadlo wax jiro oo sax aniga waan ku nolahay swedan inta uu maxamud shegayna waan arke lkn waxaan ku darsanaya in ay soomalida isliido iyodoo la liidan hadey soomali garab is siin leheed oo is cawin leheen dhibkan maku dhici laheen
August 13, 2012 at 12:37
Aad ayaan ugu farax sanahay booga uu qoray hal yayga dadayar iyo waliba firkiisa wanaagsan, thanks mr mohamud and jiccale waa roll modeladeena sverige
Maxamuud MAHADSANID Walaakeen **
Waqtigaaga iyo Maskaxdaada aad ku dhalaaliday sideey bulshadaada uga samota bixi lahayd , mowjadaha dacaayada ah ee kaga imaaneysa , bulshada swedhsihka ah . Waa arin wanaagsan
DARDAARAN :- Haddeey Jiraan dad soomaaliyeed oo aan dhaqan wanaagsaneyn ama , aad isleeda soomaalida wax qaldanbaa laga aaminsanyahay . Adigu waad bedeli kartaa sawirkaa , oo macaamiishaada wanaaji , markaa qofkaa kula tacaamulaa , wuxuu fahmaa waxa uu soomaalida laga sheegaa iyo waxa uu kaa arkay ineey kala duwanyhiin . Sidaasna sawir wanaagsan ayuu nooga aaminaa
August 13, 2012 at 13:00
naago badan oo sweden ku nool waxey ku uriga fakirana iney islmo iska dhadhalaan aysan waxbo qabsan ay dhahaan ninkeyga aisoo shaqeynaayo iyada 10 ciyaal ay guuriga dhashaa hadhow markey awoodi weyso iney wajibkii laga rabay ay kaoso baxdo saas sociolka ku qataan ciyaalkeeda maxaa u diiday in ay shaqeystaan somalida waxaa udiiday waa dad siad alaga aminbsan yahay ah boqolkiiba 50 somalida ma rabana iney shaqeystaa walaale ha is dalin aniga ku dalaya.
August 13, 2012 at 14:07
asc wr wb tnx mr mahamud that is good ide mansha alah anyway somalid illahay ha cawiyo waa dad iska dhiban me my self i saty sweden 2 years and mansha allah í can talk 2 swedhish langouge very well so i want to say my people we most to learn svenska spårk hård insha allah
August 13, 2012 at 19:48
War wiilkaan figradiisa waa fiicantahay laakiin qabiilkiisa noo sheega aan isbaranee, markaas ayaa taladiisa macaanaankartaa ama qaraaran kartaaye
ahmed wadani says:
August 13, 2012 at 22:47
qabiilkii noo sheeg kulahaa qaran ayaaad sheeganeysaa wiilka waa wiil somaaliyeed muslin ah bas ku dhaaf intaas waa ku sidee mise waxaad dooneysaa waa 4,5 daarood hawiye isaaq athares waar waxaa iska dhaaf qof muslin oo soam,lai ah weeye
August 14, 2012 at 00:25
waxaa haboon in lafaakaro somali waan nahay waxaa jiira ma qaarsona niinkasto wax hor logu marii karoo keena wa loo bahan yahay horaa loyirii coolka waraf malagu dayay hada waxaan joga sweden waxana imii 2010 waxaan walii larahanaya sfi waxaan doona shaqoo maheelin walii shaqoo dhamaystiiran waxaan see amiin sanahay daadal badan kadiib waan heelaya melahaan hiig sanayo 1 aqoon waa muhii ama horay ulahoow ama hadaa biilow taas waa furaha noloosha taa hadaan garanoo waxaa kalee waa imanayaaan intaa waa araagtii
August 14, 2012 at 01:02
As maxamed fikirkiisu waa mid aad u wanaagsan alle ha ka abaal mariyo tan kale hadaynu somali nahay waxa qeyrkeen inaga reebay waa cudurka qabyaalada inta aynu taa aaminsanahayna horumar gaari maynu ma ka warhaysaan waxay carabtu shacabkooda ugu khudbeeyaan hadaydaan dhibta iska dayn soomaaliyoo kalaad noqoneysaan oo waxaynu u noqonay aduunka hal hays! Marka qabiilka dhaafoo qalinka qaata!!!hadaynu dhulka iska qaadno oo aynu dad mutacalimiin ah NoqonoWw axaad arkeysaan anagoo bari layna kala horarsanayo kheyR ayaan idiin rajeynayaa iyo Is qadarin
asc wr wb aqyarunas waydin salamay dhamantiin gar ahan bahda webka somaliska sxb intas ka dib hadan ka hadlo fikirkayga maxamuud wuu mahansanayahay sida qiimaha badan ee uu i difacayo dadkiisa iyo dalkiisaba somalida kalena waxan kula dar darmaya inay ka shaqeeyan siday sharafkooda kor u qadilahaye bulshada kale ee ay ku dhax noolyihin somali waxay ku mahmahda hel meesahay is dhigto ayaa lagu gowraca marka inadan sas noqonina wabilahi toofiiq
aqayaarat waan soo habaabay wxaan raadinoyaa laanta socdaalka intee ku qortayne in aan fikradeyda ka dhibto islaan ayaa dhiig lagag qaaday ila mahed in dhiig laga qaadee rab taa see wax yeelaa seena ugu qabtaa balanta safaadada ma i soo sheeg tiinoo
August 16, 2012 at 00:57
asc dadka somaliyeedow qaasatan walalkeen mohamud walal waxan kudgula talinaa inaad meeshada kasii wado mida kale waxaad raadisaa inaad la xiriirto walalaha somaliyeed ee sidada oo kale dadaalay ee caafimadka qaba somalinimaduna ku weyn tahay sameeyana dalad aqoonyahan oo u dooda xaquuqda dadka somaliyeed ee sida qaldan loo maleeyo ASC